Walitti bu’iinsa aanaa Baabbilee gandoota afur keessatti umameen namni hedduun qe’ee fi qabeenya irra buqqifamuu gabaafame
Godina Harargee bahaa aanaa Baabbilee Aradaalee Gamachuu, barkalee, Awshariif ,lakkoolee fi Erar ibaadaa keessatti, guyyoota sadan dabran keessa walitti bu’iinsa dhalattoota Oromoo fi Hawwiyyaa jiddutti uumameen, dhalattoota Oromoo irraa namni 8 ajjeeffamuu fi namni hedduun madaawuu gabaafame. Dabalataanis namoonni lakoofsaan hedduu immoo qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii guyyaa sadan dabraniif daandiiwwan magaalaa Baabbilee irratti harca’anii kan rakkataa jiran tahuu nammoonni naannicha irraa dubbifne nuuf himan.
Akka namni naannawa san irraa dubbisne tokko nuu himetti, “Ummanni gosa Hawwiyyaa kun duraan naannoo Soomalee irraa lafa dheedumsaa barbaada daangaa Oromiyaa seenuun ummata waliin nagayaan jiraataa turan , amma immoo duula lafa babaldhifatuu jalqabuun lafa keenya irraa nu buqqisaan” jedhe.
Walitti bu’iinsi akkanaa kun aanicha keessatti waggaa tokko dura kan jalqabame tahus kan ammaa hedduu hamaa fi manneen barnootaa fi Keellaawwan Fayyaa gandoota afran keessatti argaman hundi, guutumaan guututti kan barbadaa’an tahuus odeeyfannoo ni addeessa.
Walitti bu’iinsa waggaa kana keessa qofa naannawa sanitti uumameen, dhalattoonni Oromoo 98 ol ajjeeffamuu gabaasni achirraa arganne ni mulisa.